XOG:- Turkish Airlines oo diiday inay qaado shaqaalihii Hay’adda Nile oo maanta ka dhoofay Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Turkish Airlines oo diiday inay qaado shaqaalihii Hay’adda Nile oo maanta ka dhoofay Muqdisho
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno saraakiisha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ayaa sheegaya in shaqaalihii Nile Organization ee Turkiga oo maanta ka dhoofay magaalada Muqdisho loo diiday inay raacaan diyaaradda Turkish Airlines.
Shaqaalahaan oo ahaa kuwa ka shaqeeynayay Isbitaalka Deva oo hoos-timaada hay’adda Nile ayaa loo diiday inay raacaan diyaaradda Turkish Airlines, kadib markii dowladda Turkiga ay shirkadda diyaaradaasi ku amartay inaysan soo qaadin dadkaas.
Ninka leh Hay’adda Nile ee ku nool dalka Maraykanka Fathullah Gulen ayaa dowladda Turkigu ku eedeysay inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee dhawaantaan ka dhacay Turkiga.
Saraakiisha ku sugan garoonka diyaaradaha e Aadan Cadde, ayaa sidoo kale inoo sheegay in shaqaalahaasi Isbitaalka Deva ee hay’adda Nile ay markii dambe raaceen diyaaradda Jubba Airways, oo u qaaday magaalada Dubai ee dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta.
Dhinaca kale, golaha wasiiradda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan soo saaray digniin ah in hay’adda Nile ay muddo 7 maalmood ah isaga baxdo dalka Soomaaliya, iyadoona mudadaasi loo qabtay hay’addaas uu maanta ugu dambeeyay.
Si kastaba ha ahaatee, diyaaradda Turkish Airlines oo maanta timid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa ka biyo diiday inay dadkaasi qaado kadib markii maamulka shirkadaasi ay sheegeen in amar ka yimid dowladda Turkiga awgiis aysan dadkaasi u qaadi karin.